Sida loo iloobo qofka aad jeceshahay ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Sida loo iloobo qofka aad jeceshahay. Dhammaanteen waxaan ku jirnay jacayl waqti nolosheenna ah. Dhacdooyinka, qosolka, cashada, xanaaqa, ... La noolaanshaha waqtiyo gaar ah qofka kale oo aan rabin in ay weligeed dhammaan, laakiin nasiib darro tani mar walba ma aha kiiska.
Inkasta oo ay ku habboon tahay in la helo qofka ugu fiican nolosha, mar walba lama gaadho. Waxaa laga yaabaa inaadan isku hadaf lahayn ama noloshaada waa in si fudud loo kala saaro. Waa halka ay ka timaaddo dhibka weyn, sidee u iloobi kartaa qofka aad jeceshahay?
Maqaalkan waxaan ku siin doonaa taxane ah talooyin ku saabsan ku caawi in aad ilowdo jacayl hore iyo in aad horay u sii socon karto, miyaad ku dhiiratay inaad akhrido?
1 Sida loo iloobo qofka aad jeceshahay talaabo talaabo
1.1 1. Jaro isgaarsiinta
1.2 2. Waa lama huraan in laga fikiro qofka kale
1.3 3. Ka fakar adiga
1.4 4. La hadal qof aad ku kalsoon tahay
1.5 5. Ku dhiiri geli dadka ka adkaaday
1.6 6. U dulqaado xanuunka
1.7 7. xooga saar wakhtiga xaadirka ah
1.8 8. Xusuusnow ceebihii hore
1.9 9. Maalgeli waxaad jeceshahay
1.10 10. Ha canaanan naftaada
1.11 11. Samee sixirolo si aad u illowdo qofka aad jeceshahay
1.12 12. Ducada
Sida loo iloobo qofka aad jeceshahay talaabo talaabo
Marka xigta waan ku siin doonnaa Talooyinka 12 si aad u fuliso oo aad u gaadho hadafkaaga ah in aad ilowdo qofka aad jeceshahay oo aad noloshaada ku sii wadato.
1. Jaro isgaarsiinta
Talada ugu horeysa ee aan ku siino sida aad u illowdo qofka aad jeceshahay waa inaad joojiso xiriirka aad la leedahay ex . Haddi ay tahay shaqsi ahaan, warbaahinta bulshada, ama taleefoonka, la xiriirida kala go'a ka dib waxay dib u furi doontaa boogahaaga. Dad badan ayaa iska indhatira tillaabadan waxaana laga yaabaa inay soo noqdaan, iyagoo dhinac iska dhigaya bogsiintooda shucuureed si ay dib ugu soo ceshadaan koodii hore.
Haddii aadan awoodin inaad jarto isgaarsiinta, si dhib leh ayaad u iloobi doontaa jacaylkan, xitaa haddii xiriirku uu ahaa mid xanuun badan. Sidoo kale, waa inaad ka takhalus walxaha iyo hadiyadaha in uu ku siiyay in aad iska ilaaliso in aad ka fikirto isaga.
2. Waa lama huraan in laga fikiro qofka kale
Inkastoo ay u muuqato jahawareer, Inta badan oo aad isku daydo inaadan ka fikirin qofka kale, aad ayaad uga fikiri doontaa iyaga. Sida laga soo xigtay cilmu-nafsiga, marka aan isku dayno inaan iloobo hore, waxaan helnaa saameyn lid ku ah. Waxaan diirada saareynaa fekerkeena inaan xasuusanno, markaa waxaad horeyba uga fekereysaa qofkaas.
Ha ku qasbin, waa lama huraan in mararka qaar ay maskaxdaada ku soo dhacaan daqiiqadahaas aad noolayd. Sifudud ha ka walwalin la soco oo sii wad.
3. Ka fakar adiga
Raadinta si aad u fahamto sida loo iloobo qofka aad jeceshahay, waxaad kobcin kartaa balwadaha sababtoo ah walbahaarka, daalka iyo welwelka. Si wax looga qabto arrimahaas oo dhan Saamaynta xun waa in aad nasato oo aad nasato. Waa in aad ka warqabto waxa baahiyahaagu yihiin wakhtigan oo aad daboosho. Is koolkoolin, labbiso oo isku day inaadan ku daalin kalinimadaada, edhamaadka xiriirku waa isbedel muhiim ah oo ay tahay in lagu sameeyo caafimaad iyo dulqaad .
4. La hadal qof aad ku kalsoon tahay
Naftaada culayska saar saaxiib aad aaminsan tahay Caawi qofka inuu ka gudbo ammaan-xumadiisa. Hadalku waxa uu caawiyaa qalbigeena, in aan iska dhaafno wax kasta oo aan gudaha ku qaadno oo fududeeyo fahamka xiisadaha iyo welwelka aan ku nool nahay. Isku day inaad sidaas u fahanto dareenkaaga ka eeg xaaladda dhinac kale.
5. Ku dhiiri geli dadka ka adkaaday
Inaad ka gudubto kala tag ma fududa, waxayna u badan tahay inaad dhib kala kulmi doonto samaynteeda. Habka ugu wanaagsan ee lagu arki karo in jabkan laga gudbi karo waa lagu dhiirigaliyo dadka aan u bogno oo ay soo mareen xaalado la mid ah. Sidan, waxaan ku dhiirigelin karnaa in aan fahanno sida ay uga gudbeen kala tagga.
Tixraacyadan waxaad ka heli kartaa:
Mareegaha iyo baloogyada: Waxa jira kanaalo si gaar ah loogu abuuray macaamiishu si ay u bartaan sida loo yeesho xidhiidho caafimaad qaba, oo ay ku jirto joojintooda.
Fiidiyowyo ama daabacado shabakadaha: Inaad noqoto mid degdeg ah oo isgaarsiineed, waxaan had iyo jeer ka heli doonaa xoogaa talo ah qof sida loo iloobo qofka.
Talooyinka asxaabta: Haddii saaxiib aad isku dhowdahay ay xaalad isku mid ah soo martay, isku day inaad la hadasho oo ku dhiirigeli isbeddelka ay sameeyeen.
6. U dulqaado xanuunka
In kasta oo ay u muuqato wax aan macquul ahayn, Waxaad ka bixi doontaa xanuunka aad ka dareemayso kala jabka. Tani waxay u baahan tahay inaad ixtiraamto xanuunkaaga oo aad u noolaato habkan kala-goynta si deggan. Markaad isku daydo inaad ka gudubto xanuunka kala goynta qofka aad jeceshahay, samee dhaqdhaqaaqyo madadaalo leh oo raadso taageerada asxaabtaada kuugu dhow.
Sidoo kale, ha is barbar dhigin qof ku guulaystay in uu degdeg uga gudbo. Sii maskaxdaada wakhti aad ku xalliso kala goyntan si qaan-gaar ah oo xilkasnimo leh.
7. xooga saar wakhtiga xaadirka ah
Talada toddobaad ee ku saabsan sida loo iloobo qofka aad jeceshahay ma qiyaasi mustaqbalka mustaqbalka ama ku hay wixii hore. Khaladka guud waa in la qiyaaso xaqiiqooyin aan dhici karin intii lagu mashquulin lahaa wakhtigan xaadirka ah iyo bislaada. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo sababaha aad ku kala tagteen, iyadoo la falanqeynayo oo la xasuusto in xaaladdu aysan wanaagsaneyn oo labadiinaba aysan caadi ahayn.
8. Xusuusnow ceebihii hore
Marka aan qofka ka soocno waxa aynu caado u leenahay in aynu wanaagga uun xasuusanno,laakin xasuusnoow haddii aad ka tagtay waxa sabab u ah wax kasta oo aan aad u macaanayn. Isku day ka fakar cilladahooda iyo dabeecadahooda xun si aad uga fogaato soo noqoshada ama qiyaas xiriir qumman. Waxaas oo dhan macnaheedu maaha in aad ka fogaato, laakiin macnaheedu maaha in aad ku haysato meel allabari.
9. Maalgeli waxaad jeceshahay
Inta uu wadnahaagu bogsanayo, waad awoodaa maskaxdaada ku hay in ay diirada saaraan hawlaha aad ka heli karto. Waxaad dib ugu noqon kartaa hawlihii hore ee aad jeclayd ama waxaad ogaan kartaa kuwo cusub oo ku farxad gelinaya. Marka laga soo tago dareenka guuleysiga, habkan waxaad bilaabi doontaa inaad yeelato jadwal iyo hiwaayad aan hore kuugu jirin.
10. Ha canaanan naftaada
Qaladka caadiga ah waa in aad u maleyso in kala jabka adiga oo keliya ay qalad tahay. Ha dareemin dambi Anagoo u malaynayna inaadan hawshii loo igmaday ka soo bixi waysay, waxaanu nahay bini’aadmi dhaliilo iyo hammi dabiici ah, sidaa awgeed, waxaanu u nugulnahay inaanu khalad samayno. Sidoo kale, isqabsi la'aanta xiriirka ayaa dadka ka saari kara.
Markaa taas xasuusnoow labadiinuba waxaad go'aansateen inaad go'aankan gaartaan iyo in, inkastoo ay ku xanuunayso, mustaqbalka waxaad arki doontaa inay ahayd waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid.
11. Samee sixirolo si aad u illowdo qofka aad jeceshahay
Baadigoobka ah in laga gudbo kala tag, dadka qaarkiis waxay ku dhaqaaqaan sixirolo si ay u illoobaan qof. Marka xigta, waxaanu ku siin doonaa tusaale aad samayso:
Warqad cad ku qor magaca qofka aad rabto in aad ilowdo oo buuxa.
Ku tuur warqadda biyaha oo ku celi weedhan soo socota saddex jeer: "Marka la eego webigan, qashinka ayaa istaaga. Waxaad nolosheyda u ahayd sidii geed geed oo kale ah. Durdurka nolosha, hadda waad ka gudubtay.
Si aad u samayso dhaqankan waa inaad aaminsan tahay inuu shaqayn doono. waa a jimicsi maskaxeed oo kaa caawinaya inaad ilowdo qofkan, in ka badan sixir oo waxay leedahay qiimo astaan ​​u ah ka adkaanta iyo illowsiinta.
Sixirka ka sokow, dad badan ayaa u jeesta ducada si ay u illoobaan jacaylkaas lumay. Marka la soo koobo, waa jimicsi kale oo maskaxeed inaad ka saarto jacaylkii hore ee noloshaada. Si kale haddii loo dhigo, waa ka-fiirsasho in laga takhaluso xanuunka aad dareemeyso markaad la macaamilayso shucuurta iyo nolol maalmeedka.
Si kasta oo ay u adag tahay, garashada sida loo iloobo qofka aad jeceshahay ayaa faa'iido kuu yeelan doonta. Hadda waa waqtigii aan ku xidhi lahayn nafteena oo aan dhegaysan lahayn rabitaankeena. Inaga oo maskaxiyan nadiif ah ayaynu awood u yeelan karnaa in aynu nafteena ku waanono oo aynu u bislaanno bini’aadam ahaan.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan laga bilaabo Disco.online wuu ku caawiyay, haddii aad xaaladdan ku jirto, xusuusnow in dhibaatadani ay dhammaan doonto. Maalmaha ugu horreeya ee ka dambeeya kala-tagga waxay u badan tahay inay adkaan doonaan, laakiin waxaad dhawaan heli doontaa waxaad u baahan tahay si aad qof uga gudubto.